नयाँ सरकार गठनका लागि निर्णायक छलफलमा तीन दल, यी नेता हुँदैछन् बैठकमा सहभागी ? « Rara Pati
नयाँ सरकार गठनका लागि निर्णायक छलफलमा तीन दल, यी नेता हुँदैछन् बैठकमा सहभागी ?
प्रकाशित मिति : २ चैत्र २०७७, सोमबार
चैत २, काठमाडाैं । नयाँ सत्ता गठबन्धनका लागि सोमबार कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबीच पहिलोपटक त्रिपक्षीय छलफल हुँदै छ । दलगत रूपमा छुट्टाछुट्टै चरणबद्ध अनौपचारिक छलफल र संवादपछि सोमबार तीन दलको संयुक्त बैठक बस्न लागेको हो । अन्तरदलीय छलफलका क्रममा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपासमेत प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विकल्प खोज्नु अपरिहार्य रहेकोमा एकमत देखिएका थिए ।
पहिलो चरणका छलफल सकारात्मक भएकै कारण नेताहरूले सोमबारको तीन दलको संयुक्त बैठक निर्णायक हुन सक्ने संकेत गरेका छन् । ‘पहिलो चरणको छलफलमा तीनै दल ओलीको विकल्प खोज्ने विषयमा तयार भएको अवस्था छ, त्यसैले यो छलफल गठबन्धनका लागि निर्णायक हुन सक्छ,’ देउवानिकट एक नेताले भने ।
तीनदलीय छलफलको पूर्वसन्ध्यामा कांग्रेस सभापति देउवाले लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने वेला आएको बताएका छन् । ‘हाम्रो देश हिमाल, पहाड र मधेस मिलेर बनेको सुन्दर देश हो । यहाँ विविधतामा मिलेर बसेको समाज छ । म सबै दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूको एकता जो छ, यो कायम रहोस्, यसलाई कसैले खलल पार्न चाहे पनि त्यो नसकोस् ।
‘राष्ट्रिय एकता कायम रहोस् भन्न चाहन्छु, अहिले राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत गर्दै राष्ट्रलाई मिलाएर लैजानुपर्ने अवस्था छ,’ देउवाले आइतबार बारामा खेलकुद विभागले स्व. खुमबहादुर खड्काको स्मृतिमा गरेको कुस्ती प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै भनेका छन्, ‘अहिले जो राजनीतिक परिस्थिति विकास भइरहेको छ, एकदमै अन्योल छ । क्लियर स्थिति आइसकेको छैन । क्लियर स्थिति नआएसम्म कांग्रेसले बोलेर काम छैन । प्रधानमन्त्री पदका लागि कांग्रेस लोभी छैन, तर आइहाल्यो भने भाग्ने कुरा पनि छैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्न माओवादी केन्द्र र जसपासमेत तयार भएपछि देउवाले नै तीनदलीय बैठकको संयोजन गरेका छन् । बैठक सोमबार अपराह्न २ बजेपछि देउवानिवास बुढानीलकण्ठमा बस्दै छ । बैठकमा तीन दलका तर्फबाट प्रतिनिधिमूलक रूपमा शीर्ष नेताहरू सहभागी हुनेछन् । कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला बैठकमा सहभागी हुँदै छन् ।
यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा जसपाका तर्फबाट संघीय परिषद् अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराई, अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो सहभागी हुँदै छन् ।
टोकियो ओलम्पिकः ६९ पदक सहित चिन निरन्तर अग्र स्थानमा
१९ साउन, जापान । जापानको राजधानी टोकियोमा जारी ३२औँ ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुदमा चीन निरन्तर ६९
खरबपतिलाई प्रधानमन्त्री र अरबपतिलाई मन्त्री बनाउ टण्टै साफः जीवनबहादुर शाही
१९ साउन, सुर्खेत। नेपाली काँग्रेसका नेता एवम् कर्णाली प्रदेश विपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले खरबपतिलाई
सांसद गजेन्द्र महतको ब्यंग्यः भरसक पति, पति नभए पत्नी मन्त्री हुनुपर्ने
१९ साउन, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्र महतले मन्त्री भरसक पति, पति नभए
कुलमानलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्न देउवाको ठाडो निर्देशन
१९ साउन, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकका रूपमा नियुक्त
डा. जागेश्वर गौतमको सरुवापछि रिक्त स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकमा डा. आरपी बिच्छा नियुक्त भएका छन्